Nidaamka Waraabka Beeraha, Nidaamka Waraabka Drip - DAYU
DAYU, BIYO BIYAHA ADUUNKA
-Tan iyo 1999-
Alaabta Waraabka Dhibicda
Mashiinka Waraabka Darka
Guryaha lagu koriyo
Beeraha yaryar iyo kuwa dhexe
Mashaariic baaxad leh
Beerta Warshadaha Beeraha
Kooxda waraabka DAYU ayaa had iyo jeer diiradda saarta oo ay ka go'an tahay xalka iyo adeegga dhibaatooyinka kheyraadka beeraha, miyiga iyo biyaha adduunka. Si firfircoon bay uga jawaabtay “Istaraatiijiyadda Dib -u -nooleynta Reer Miyiga” iyo wacitaanka siyaasadda “miyiga quruxda badan”, oo xoogga la saaro “saddex nooc oo biyo ah” (ilaalinta biyaha waraabka beeraha, daaweynta bullaacadaha ee miyiga, Biyo nadiif ah oo la cabo oo miyiga ah). ku soo biiriyaha xalka guud ee xirfadlaha ah ee Qorsheynta Mashruuca, maalgashiga iyo qorshaha maalgelinta, naqshadeynta injineernimada, dhismaha, hawlgalka mashruuca iyo dayactirka iyo adeegyada beeraha waraabka badbaadinta biyaha beeraha, daaweynta bullaacadaha, wargelinta ilaalinta biyaha, arrimaha biyaha caqliga leh, daaweynta webiga, dib -u -soo -nooleynta deegaanka biyaha, muuqaalka beerta, beeraha xarunta, beeraha deegaanka, beerista beeraha, kaymaha miyiga, iwm.
Unugyada Ganacsiga ee Muhiimka ah
DAYU SMART BIYAHA
SOO SAARKA DAYU
Kooxda Waraabka Dayu waxay ku guuleysteen magaca 2019-2020 Co-Biyaha Wanaagsan ...
Madasha Koowaad ee Ilaalinta Biyaha Waqooyi Galbeed ayaa si guul ah loo qabtay ...
Samaynta Jihaynta Istiraatiijiyadeed, Iyadoo la sawirayo dulucda Dayu '...
Xuska sannad -guuradii 100 -aad ee ka soo wareegtay aasaaskii Shuuciga ...
Warbixinta CCTV — Kooxda Waraabka ee DAAYU ayaa ka soo muuqday ASEA 17 -aad ...
Madasha 2aad ee Ilaalinta Biyaha Shiinaha ayaa ka furmay Lanzhou, Gansu, China
Oktoobar 10, 2020, madasha labaad ee ilaalinta biyaha Shiinaha, joi ...
Madasha 2aad ee Ilaalinta Biyaha Shiinaha, oo ay soo Qabanqaabisay Waraabka DAYU G ...
Kooxda Waraabka Dayu waxay si guul leh u iibiyeen dammaanadihii la beddeli lahaa!
DAYU waxay sii wadaysaa la dagaalanka Aafada
Xafladda Deeqda Kooxda Waraabka ee DAYU Oo Lagu Qabtay Benin Safaaradda ...
Dufcaddii labaad ee agabka ka -hortagga cudurrada ee Dayu Irrigatio ...
DAYU ayaa ugu deeqday Gansu 50 kun oo maaskaro caafimaad oo la iska tuuri karo ...
Madasha ugu horreysa ee badbaadinta biyaha Shiinaha ayaa si guul leh loogu qabtay Beijing
Oktoobar 30, 2019, “ISKAASHINTA BEERAHA PAKISTAN-CHINA ...
5tii Sebtember, DAYU Irrigation Group shirkad Israel – DAYU WAT ...
4tii Sebtember, Kooxda Waraabka DAYU waxay saxiixeen iskaashato istiraatiiji ah ...
Isagoo wajahaya dalka oo dhan oo tagaya suuqa caalamiga ah, waxaan ku dadaaleynaa inaan horumarinno shirkad injineernimo oo dhammaystiran oo isku dhafan ilaalinta biyaha iyo la -talinta mashruuca tamarta, sahanka iyo naqshadeynta, qandaraaska guud ee dhismaha iyo dhismaha. Waxaan si isdaba joog ah u qabanay shaqada naqshadeynta iyo agabka sahayda ku dhawaad ​​30 mashruuc oo laga fuliyay Nigeria, Uzbekistan ， Koonfur Afrika, Ukraine ， Vietnam, Pakistan, Nepal, Georgia, Cuba, Turkey iyo dalal kale.
Mashruuca waraabka Photovoltaic ee Pakistan
Qorsheynta casriyeynta iyo mashruuca naqshadeynta Du ...
Mashruuca waraabka beerista walnut ee Koonfurta ...
Mashruuca waraabka faleebada ee Uzbekistan
Shirkaddayadu waxay leedahay sagaal saldhig oo wax soo saar oo ku yaal Tianjin, Xinjiang, Mongolia, Jiuquan, Wuwei, Dingxi, Shaanxi, Guangxi, Yunnan, iwm Soosaarka sanadlaha ah ee tuubooyinka waraabka faleebada (cajalad) waa 5 bilyan oo mitir, 200000 tan oo ah alaab biibiile ah, 1000 tan oo ku rakiban biibiile, 20000 oo qaybood oo bacrimin ah, sifeyn iyo nidaamyo kontarool otomaatig ah, iyo 1000 nooc oo mashiinnada waraabka rusheeyaha ah. Badeecadaha (qalabyo iyo xalal dhammeystiran) ayaa soo ifbaxaya tobanaan milyan oo mu dhul beereed biyo-badbaadin ah oo ku yaal Shiinaha waxaana loo dhoofiyaa in ka badan 50 waddan iyo gobollo sida Thailand, Koonfur Afrika, Benin, Nigeria iyo Ecuador.
PE Tuubada (waraabka)
isku xirnaanta Waraabka
2021 Alaab -qeybiye Shiinaha Warshadaynta Caaga Gray ...
Ciid-baaxad weyn oo ciid ah oo shaandhaynta biyaha ...
Waraabka Beeraha ee PVC Tubbada Biyaha ee Layflat
Machadka Cilmi -baarista DAYU
Waxay leedahay saddex saldhig, laba goobo shaqo oo tacliimeed, in ka badan 300 teknolojiyad shatiyeysan iyo in ka badan 30 shatiyada hal -abuurka.
Waxay soo uruurisay koox khubaro sare ah waxayna maamushaa 5.7 bilyan oo Doolarka Mareykanka ah oo ah beeraha iyo lacagaha la xiriira biyaha, oo ay ku jiraan laba maaliyad goboleed, mid waa Sanduuqa Kaabayaasha Beeraha ee Gobolka Yunnan midna waa Sanduuqa Kaabayaasha Beeraha ee Gobolka Gansu, oo noqday matoor weyn oo loogu talagalay horumarinta badbaadinta biyaha ee DAYU.
Kooxda Naqshadeynta DAYU
Oo ay ku jiraan Machadka Naqshadeynta Gansu iyo Ilaalinta Biyaha ee Hangzhou iyo Sahanka Korontada iyo Machadka Naqshadeynta, naqshadeeyayaasha 400 waxay macaamiisha siin karaan qorshaha naqshadda guud ee ugu xirfadda badan uguna dhammaystiran waraabka badbaadinta biyaha iyo dhammaan warshadaha kaydinta biyaha.
Waxay leedahay shahaadada heerka koowaad ee qandaraaska guud ee ilaalinta biyaha iyo dhismaha korontada. Waxaa jira in ka badan 500 maamuleyaal mashruuc oo aad u fiican, kuwaas oo garan kara is -dhexgalka qorshaha guud iyo rakibidda mashruuca iyo dhismaha si loo gaaro injineernimada silsiladda warshadaha.
Waxay inta badan ku hawlan tahay cilmi-baarista iyo horumarinta agabka biyaha badbaadiya, hal-abuurka farsamada iyo soo-saarka iyo soo-saarka alaabta. Waxaa jira 11 saldhig oo wax soo saarka Shiinaha. Warshadda Tianjin waa udub -dhexaadka iyo saldhigga ugu weyn. Waxay leedahay qalab wax soo saar oo caqli badan oo casri ah iyo khadadka wax soo saarka.
DAYU Adeegga Biyaha Casriga ah
Waa taageero muhiim u ah shirkadda si ay u hoggaamiso jihada horumarineed ee wargelinta dhawrista biyaha qaranka. Waxa DAYU Smart Water qabato waxaa lagu soo koobay "Skynet", kaas oo kaabaya "shabaqa dhulka" sida kaydka, kanaalka, dhuumaha, iwm.
Waxay diiradda saareysaa daaweynta wasakhda gudaha ee miyiga, waxay u adeegtaa dhismaha tuulooyin qurux badan, waxaana ka go'an xallinta wasakheynta beeraha iyada oo loo marayo ilaalinta biyaha iyo yareynta qiiqa.
Waa qayb aad muhiim u ah kooxda Waraabka DAYU, oo mas'uul ka ah maamulka ganacsiga caalamiga ah iyo horumarinta. Si dhow ula socda siyaasadda “hal suun, hal waddo”, oo leh fikradda cusub ee “bax” iyo “keenista”, DAYU waxay aasaastay xarunta teknolojiyadda Mareykanka ee DAYU, laanta DAYU Israel iyo DAYU Israel cilmi -baarista hal -abuurka iyo xarunta horumarinta, taas oo in la mideeyo kheyraadka caalamka oo la gaaro horumar degdeg ah oo ganacsiga caalamiga ah.
No.10, Wadada Minwang, Beerta Warshadaha Jingbin, Degmada Wuqing, 301712, Tianjin, Shiinaha